Maka: ip idilesi | Martech Zone
Maka: idilesi ye-ip
NgoLwesine, Aprili 1, 2021 NgoLwesine, Aprili 1, 2021 Douglas Karr
Ngamanye amaxesha ufuna idilesi yakho ye-IP. Imizekelo embalwa yenza mhlophe ezinye iisetingi zokhuseleko okanye ucoca ukugcwala kuGoogle Analytics. Gcina ukhumbula ukuba idilesi ye-IP ebonwa ngumncedisi wewebhu ayisiyo idilesi ye-IP yangaphakathi yenethiwekhi, yidilesi ye-IP yenethiwekhi okhoyo kuyo. Ngenxa yoko, ukutshintsha iinethiwekhi ngaphandle kwamacingo kuya kuvelisa idilesi entsha ye-IP. Uninzi lwababoneleli ngeenkonzo ze-Intanethi abaluniki amashishini okanye amakhaya amileyo